Groupe Aina : mitohy hatrany ny fizarana vokatra vaovao | NewsMada
Groupe Aina : mitohy hatrany ny fizarana vokatra vaovao
“Ho mandrakizay”, anisan’ireo hira vaovaon’ny Groupe Aina, nanaitra ireo mpankafy tato ho ato io. Hiaka-tsehata tsy ho ela indray izy ireo…
Manohy ny lalany hatrany… Fantatra fa tsy mitsahatra mizara ny vokatra vaovao ny Groupe Aina amin’izao fotoana izao. Efa nisy ny fiakarana an-tsehatra notontosain’izy ireo tamin’ny volana jolay lasa teo. Mbola hitohy izany, amin’ny alalan’ny “cabaret live”, izay hataon’ny Groupe Aina ny zoma 26 aogositra izao, ao amin’ny Café de la Gare Soarano.
“Miezaka hatrany izahay manome ny kanto ho an’ny mpankafy, ka zarainay tsikelikely ireo vokatra”, hoy ny fanazavana nomen’i Benja, lehiben’ny tarika. Voaporofo amin’ny alalan’ireo hira vaovao izay mandeha amin’ny fahitalavitra, toy ny “Gasikara”, sy ny “Ho mandrakizay”.
Mifanohy hatrany tamin’ilay seho notontosain’ny Groupe Aina tetsy amin’ny CCEsca Antanimena, izay nentin’izy ireo nanamarihany ny fiverenany, tamin’ny taon-dasa, ny fiakarana an-tsehatra rehetra. Fotoana nampahafantaran’izy ireo ny “aza meky”, rakitsary faharoan’ny tarika izany. Tamin’io fotoana io ihany koa no nahitan’ny mpankafy an-tsehatra voalohany an’i Mina, niaraka tamin’ny Groupe Aina. Efa nisongadina tao anatina tarika lehibe iray ity tovovavy ity, ary fantatra ihany koa amin’ny fifehezany ny sehatra amin’ny maha mpanao teatra azy.
Dimy ankehitriny ny mpikambana raikitra ao amin’ny Groupe Aina: Benja, Hery, Do, Denis ary Mina. Ankoatra ireo hira vaovao, mbola mamerina hatrany ireo hira nahafantarana ny Groupe Aina taloha, toa ny “Mifalia”, “Tity”, “Matoria”, “ambiansy Mapouka”, sns, ihany koa izy ireo.